Kununura chakabiwa musi Västbyn! | Holmbygden.se
Posted on 20 Gunyana, 2016 kubudikidza Holmbygden.se
“Chikepe anogona chete kushandiswa zvashata ezvinhu”, rinoti chiratidzo muna West Village kushambira. Zvino zvinoratidzika kununura chikepe, zvisinei, vave zvakabiwa.
Ungangove, kununura chikepe musi Västbyn chakabiwa September ichi. Disclosures achatorwa Ndapota kana zvimwe kuona chinhu. Maererano kakawanda yokugeza vashanyi achanunura chikepe akanga ipapo muzhizha. Zvino, zvisinei, hazvina zvakacherechedzwa kuti chinoshayikwa, uye kuti akanga yakazara kumativi grilli nharaunda.
Chapupu mashoko pamusoro zvichibvira kuba
Zvinogona akawedzera kuti 6 September kumativi 17 o'clock kubva muchikepe aona motokari pamusoro achigeza. Kana iwe akabva akananga kumhenderekedzo nechikepe, saka vakaita motokari pakarepo kukurumidza uye vakaenda pamwe cabinet mikova yakazaruka. Pashure paizvozvo pakanga kanenge pasina chikepe. Kana ipapo paiva tisati zvinganzi asina vakati chokwadi, asi Ungangove zvingava chokuita.
Ko mumwe munhu angati pavakaona ichangoburwa pedyo napedyo kana kuona chii zvingadarowo motokari, saka ndapota S!
Unoitei kana ukaona zvakada?
Akatarisa imwe pasina mubvunzo mberi kutyorwa vanofanira Chokwadi shevedzai Police Via 112. Nokuziva kuti mapurisa kazhinji 5 thousand kure, mumwe anogona kunze kana mibvunzo sezvizvi kana ezvinhu “chete” aona chinhu kufungira, zvinogonawo kuva vakachenjera kugoverana naro zvakananga Holm Group on Facebook. Pamwe chete mufananidzo akakodzera. Saka asvika zvakananga pamusoro 300 Members nemaziso uye kumativi Holm. Join nemiwo kana hamuna nechakare, kuti uzive zviri kuitika kumaruwa.
Kununura Resources vane, asi zvakakosha kumaruwa
Kununura chikepe muna Västbyn chinhu chinokosha chinogona kuti unonyura kunoitika mukati pamhenderekedzo yegungwa kana pamusoro pegungwa. Somumwe midziyo kurarama ari munzvimbo dzakati vakawanda kunokosha zvikuru kana kunowanzoitwa nguva kupiwa basa uye amburenzi kusvika. In Holm kunogonawo kurwira chikepe kushandisa vanonzi Enhanced vavakidzani vari dzakapfirirwa munzvimbo. Panomira achinyudza dzokuridzisa nadzo Holmsjön okuzvidzivirira sos Alarm rwoga Vanozvipira akapoteredza Holm Via SMS uye mukana kununura munhu pakutambudzika pamberi voruzhinji kuchengeteka vashandi wauya. Verenga zvakawanda pamusoro purojekiti Vakasimbiswa muvakidzani muna Holm pano uye kuti inoshanda sei. Pano unogona kutaura kwako mubereko kana uchida kubatanidzwa somuzvipiri upfumi.